China 316L 316 Hot akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere rụpụta na Factory | Huaxiao
316 bụ igwe anaghị agba nchara pụrụ iche, n'ihi mgbakwunye nke Mo ọcha na corrosion eguzogide, na elu okpomọkụ ike ka ukwuu mma, elu okpomọkụ ruo 1200-1300 degrees, ike ga-eji n'okpuru ọjọọ ọnọdụ. 316L bụ ụdị igwe anaghị agba nchara nke molybdenum. N'ihi molybdenum ọdịnaya dị na nchara, ngụkọta arụmọrụ nke nchara a dị mma karịa nke 310 na 304 igwe anaghị agba nchara. N'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị elu, mgbe ịta ahụhụ nke sulphuric acid dị ala karịa 15% ma ọ bụ karịa karịa 85%, igwe anaghị agba nchara 316L nwere ọtụtụ ebe. jiri. 316L igwe anaghị agba nchara nwekwara ezigbo iguzogide ọgụ chloride ma ya mere ọtụtụ ndị na-eji na gburugburu mmiri. Igwe anaghị agba nchara 316L nwere oke carbon nke 0.03 ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ ebe mgbakwunye anaghị ekwe omume yana oke nrụrụ corrosion chọrọ.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 316L 316 Na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere, 316 316L HRP, PMP
Ọkpụrụkpụ: 1.2mm - 16mm
Pallet arọ: 0.5MT-3.0MT
316 Otu ọkwa si na ọkwa mba dị iche iche
316 Chemical akụrụngwa ASTM A240:
C：.0.08 ，Na ：≤0.75 Mn ：2.0 ， S ：.0.03 ，P ：≤0.045, Uhie ：16.0～18.0 ，Ni ：10.0～14.0，
316 usoro ihe onwunwe ASTM A240:
Ogologo (%):> 40%
Isi ike: <HRB95
316L Otu ọkwa si na ọkwa mba dị iche iche
C：≤0.03 ，Na ：≤0.75 Mn ：2.0 ， S ：.0.03 ，P ：≤0.045, Uhie ：16.0～18.0 ，Ni ：10.0～14.0，
316L Mechanical Ngwongwo ASTM A240:
Ike ọdụdọ:> 485 Mpa
Ekwe Ike:> 170 Mpa
Tụnyere 316L / 316 na 304 igwe anaghị agba nchara Ngwa
304 ígwè nwere ike iguzogide corrosion nke na igirigi ibu sulphuric acid, phosphoric acid, formic acid, urea, wdg O kwesịrị ekwesị maka n'ozuzu mmiri were, na ọ na-eji na-achịkwa gas, mmanya, mmiri ara ehi, CIP ihicha mmiri mmiri na ndị ọzọ n'oge na-enweghị ma ọ bụ na-enweghị kọntaktị na ihe. Ihe nchara nke 316L agbakwunyela ihe molybdenum na ndabere nke 304, nke nwere ike meziwanye nguzogide ya na mmebi nke ikuku, mmekorita nke oxide ma belata nchekasị na-ekpo ọkụ n'oge ịgbado ọkụ, ọ nwekwara ezigbo nguzogide mmebi nke chloride. A na-ejikarị ya eme ihe na mmiri dị ọcha, mmiri distilled, ọgwụ, sauces, mmanya na oge ndị ọzọ nwere nnukwu ịdị ọcha na mkpa mgbasa ozi siri ike. Ọnụahịa nke 316L fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke 304. Ngwongwo igwe 304 dị mma karịa 316L. N'ihi na nke corrosion eguzogide na magburu onwe okpomọkụ na-eguzogide nke 304 na 316, ọ na ọtụtụ-eji dị ka igwe anaghị agba nchara. Ike na ike nke 304, 316 yiri nke a. Ihe dị iche n’etiti ha abụọ bụ na nkwụsị nke mmebi nke 316 dị mma karịa nke 304. Ihe dị mkpa bụ na a na-agbakwunye metal molybdenum na 316, nke meziwanye ọkụ ọkụ.
Anyị nwere ike iji electroplating ma ọ bụ oxidation na-eguzogide ọla iji hụ na carbon nchara elu, mana nchedo a bụ naanị ihe nkiri. Ọ bụrụ na e bibie oyi akwa nchebe, nchara nchara na-amalite nchara. Nguzogide corrosion nke igwe anaghị agba nchara na-adabere na chromium element. Mgbe ọnụọgụ nke chromium agbakwunyere ruru 10.5%, nkwụsị nke ikuku nke igwe anaghị agba nchara ga-abawanye nke ukwuu, mana ọ bụrụ na ọdịnaya nke chromium dị elu, ọ bụ ezie na ọ nwere ike melite ụfọdụ nkwụsi ike nke corrosion. Ma ọ bụghị doro anya. Ihe kpatara ya bụ na ọgwụgwọ a gbanwere ụdị oxide dị n'elu ka nke dị n'elu nke yiri nke ahụ e guzobere na metal chrome dị ọcha, ma akwa oyi akwa a dị ezigbo mkpa, ọ nwere ike ịhụ ihe na-egbuke egbuke nke nchara. Iji mee igwe anaghị agba nchara nwere ihu pụrụ iche. Ọzọkwa, ọ bụrụ na e bibie elu ahụ, nchara a na-ekpughe ga-emeghachi omume na ikuku. Usoro a bụ n'ezie usoro mmezi onwe ya, nke na-eweghachi ihe nkiri passivation ma nwee ike ịga n'ihu na-echebe. Ya mere, igwe anaghị agba nchara nwere otu njirimara, ya bụ, ihe dị na chromium dị elu karịa 10.5%, na ọkwa nchara ahọrọ nwekwara nickel, dịka 304. Mgbakwunye nke molybdenum na-emeziwanye mmebi nke ikuku, ọkachasị megide ikuku nwere ikuku chloride, nke bụ ikpe na 316.
N'ebe ụfọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, mmetọ a dị oke njọ, elu ga-adị ọcha, ọbụnadị nchara emeelarị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ejiri nickel nwere igwe anaghị agba nchara, a pụrụ inweta mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi. Ya mere, a na-ahọrọ mgbidi mgbochi anyị, mgbidi n'akụkụ na elu ụlọ site na 304 igwe anaghị agba nchara, ma na ụfọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ike ma ọ bụ ikuku mmiri, 316 igwe anaghị agba nchara bụ ezigbo nhọrọ.
304 18cr-8ni-0.08c Ezigbo nguzogide corrosion, nkwụsị oxidation na processability, na-eguzogide ọgwụ aerobic, nwere ike zọọ, enwere ike iji ya mee arịa, tebụl, arịa ụlọ, ihe ịchọ mma ụlọ, na ngwa ahụike.
316 18cr-12ni-2.5Mo bụ ihe a na-ahụkarị na iwu mmiri, ụgbọ mmiri, nuklia nuklia na nri akụrụngwa. Ọ bụghị naanị na ọ na - eme ka mmebi nke kemịkalụ hydrochloric acid na oke osimiri dị mma, kamakwa ọ na - eme ka nsonaazụ nke brine halogen meziwanye.
Nke gara aga: 310s na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara
Osote: oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara warara
Hot Rolled igwe anaghị agba nchara efere